वर्ष crows बाँच्न कति सिक्न
यी चरा अवधिको धेरै कारक निर्भर छ, तिनीहरूलाई बीचमा मुख्य को Ravens बाँच्ने कहाँ छ। जंगली यी चरा एकदम बिट बाँच्न - पन्ध्र वर्ष को बल मा। यो कारणले गर्दा खतरा हरेक चरण मा जंगली र खाना को बारम्बार कमी मा अनिवार्य आफ्नो दिन कम भन्ने तथ्यलाई छ। तसर्थ, वास्तवमा धेरै crows बाँच्न कसरी स्वतन्त्रता मा - मौका वा भाग्य को कुरा हो।
तपाईं यो चरा घर बसोबास गर्ने निर्णय भने, उनको जीवन सम्पूर्ण तपाईं मा निर्भर गर्दछ। उचित हेरविचार र पोषण यसलाई तीस वर्ष को लागि आफ्नो मित्र हुन सक्छ। पहिले, crows तीन सय वर्ष बाँच्न सक्षम छन् कि एक विश्वास थियो। निस्सन्देह, यो विश्वास गर्न त सजिलो छ, तर त्यहाँ सिद्ध डाटा छन्। यी अद्भुत जगतले सत्तरी वर्ष पुरानो हुन बस्ने गर्दा त्यहाँ अवसरमा गरिएको छ। त्यसैले, प्रत्यक्ष Ravens, बरु जटिल र अस्पष्ट को कति वर्ष को प्रश्न।
यी चरा धेरै असामान्य र रहस्यमय छन्। र धेरै वर्ष crows बाँच्न कसरी, यो बाहिर दुनिया मा, तर पनि आफूलाई मात्र छैन निर्भर गर्दछ। तथापि, तिनीहरूले धेरै चतुर र, दुर्लभ अवस्थामा छन् छोटो जीवन छ। को काग कुरा सरोष बाटोमा pecks रूपमा उदाहरणका लागि, हामी अक्सर हेर्नुहोस्। र कार आउँदै गर्दा, त्यो फरक दिशामा हतार गर्न आतंक मा छैन, तर केवल कार त्यहाँ जाने, र त्यो त आफ्नो भोजन जारी बुझेर पनि पेटी मा प्रस्थान। त्यहाँ पनि अवस्थामा खाना बाहिर प्राप्त गर्न एक नट दरार सकेन कि एक काग, बस बाटोको निम्ति यसलाई lozhila जसमा गरिएको छ। त्यसपछि त्यो नट कार ड्राइव गर्नेछन् पर्खनुहुन्थ्यो। एक पटक यो हुन्छ, यो चरा चुपचाप भोजन बारेमा सेट।
प्रश्न "कति वर्ष crows बाँच्न?" यो अस्पष्ट छ। तर आफ्नो मानसिक क्षमता र चाल पक्कै मा। जो केवल चाल आफूलाई र आफ्नो सन्तानलाई को जीवन बचाउन छैन जाँदैछन्। एक काग गरेको गुँड, बचेराहरूलाई बिरालो पीछा जहाँ जहाँ थिए मामला। र आफ्ना छोराछोरीलाई सुरक्षित गर्न, काग कुकुर भौंक अनुकरण गर्न थाले र यति convincingly घरेलू predator डरा र यसरी मेरो परिवार सुरक्षित छ कि यो गरे। साथै, यी चरा राम्ररी विकसित तथाकथित "एकता को आत्मा"। त्यहाँ "भाइ" को एक जीवन एउटा खतरा छ भने तिनीहरू सधैं प्रत्येक अन्य सहयोग गर्न तयार छन्।
Crows, लामो समय एक मानिस संग जीवित र आफ्नो कौशल केही प्राप्त। र बस मानिसहरूलाई जस्तै, यी चरा मजा कसरी थाहा। तिनीहरूले तिनीहरूलाई संग खेल्दै विभिन्न तरिकामा पशुहरू तंग, र त्यसपछि दूर उड। साथै, यी हँसिलो चरा छोराछोरी मनपर्ने सोख लागि देखेको थिए - एक रोलर कोस्टर चढेर। मात्र तल, को छत बाट यो स्ट्रिम र हो कि वस्तुहरूको विभिन्न प्रयोग गरेर यी आकर्षक हेरफेर बनाउने।
Ravens तर प्रशंसा जगाउने गर्न सक्दैन। तथ्यलाई लागि कम से कम आफ्नो बुद्धि अविश्वसनीय अचम्मको हुन्छ। यो चरा को स्तर अनुसार दोस्रो स्थानमा डल्फिन र chimpanzees एक व्यक्ति पछि हो। हामी वास्तवमा बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ हुनत छैन crows तथाकथित मानिसको "पुर्खाहरूको" भन्दा धेरै चलाख छन्, तर पक्कै पनि तपाईं केहि भन्न सक्दैन। तर, हामी अझै पनि यी अचम्मको चरा बारे धेरै थाहा छैन भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। जीवित crows यति धेरै वर्ष - सहित पूर्ण लेख नै प्रश्न समाधान गर्न रहनेछ?
एक स्कंक कहाँ गर्छ? स्ट्रिप स्कंक: विवरण, फोटो
हरर चलचित्रहरू 90 को दशक: किशमिश "दोस्रो टियर"
दबाइ "akvamaris", प्रयोगको लागि समीक्षा र सिफारिसहरू
अमेरिकाको राजधानी न्यू यॉर्क वा वाशिंगटन हो? अमेरिकाको इतिहास
युरोप - प्राचीन ग्रीस को पौराणिक कथाहरु
Rinogramma: को eosinophils गर्न नाक बाट swabs - साधारण चिसो को कारण निर्धारण गर्न राम्रो तरिका
Canon 600D: मोडेल, विनिर्देशों र समीक्षा सुविधाहरू